Ku saabsan Dubai | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Ku saabsan Dubai
Goob istiraatiiji ah
Waxaa loogu magac daray adduunka oo dhan xarun caalami ah oo ganacsi iyo hal-abuurnimo, Dubai waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan dunida ee loo dalxiis tago.
Dubai waa magaalo qurux badan oo samaysa mid ka mid ah 7 safaaradood oo ku yaal Imaaraadka.
Soojiidasho yaab leh
Soojiidashada Cajiib ah
Dubai waxay bixisaa soo jiidashooyin la yaab leh sida Burj Khalifa sharafta leh, dukaan ku iibiya suuqyo gaar ah iyo munaasabado ciidaha oo ay ku dhiirrigeliyaan dhadhamada adduunka oo dhan 7-xiddigle hoteel.
Dubai waa magaalada UAE dadka ugu badan uguna dadka badan. Waxaa jira inka badan 2.7 milyan oo qof oo ka kala socda 200 oo dhalasho oo deggan magaalada. Dalxiisayaal tiro badan iyo ganacsato ayaa magaalada u soo galaya ganacsi, ama maalin kasta farxad. Dubai waa mid ka mid ah meelaha ugu habboon ee ganacsiga adduunka laga sameeyo iyadoo leh tikniyoolajiyad casri ah iyo kaabayaal, nolol canshuur la'aan ah iyo goob istiraatiiji ah oo ku taal bartamaha qaaradaha waaweyn ee ganacsiga. Barwaaqada iyo faa iidada badan ee ku soo badatay magaaladan xiisaha badan waa sababta Dubai u tahay meelaha ugu dalxiiska badan adduunka!
Taariikh Gaaban oo Dubai ah
Ku raaxaysashada diirimaadka qorraxda sanadka oo dhan, oo leh xeebo qurux badan, lamadegaan xiisa leh, suuqyo raaxo leh iyo hoteello, soo jiidasho cajiib leh oo dhaxal gal ah iyo jaaliyadaha ganacsiga, Magaalada riyooyinku waxaa ku soo qulqulaya malaayiin ganacsi iyo booqdayaasha firaaqada ah sanad walba kana yimaada geeska kala duwan ee aduunka.
Qoyska Maktoum oo ay weheliyaan 800 oo xubnood oo ka socda qabiilka Bani Yaasiin ayaa guryahooda ka dhistay afgambiga afka hoostiisa sanadkii 1833. Dhul gariirkani wuxuu ahaa deked dabiiciga ah, isla mar ahaantaana, Dubai waxay noqotay xarun udhexeysa luul, badda, iyo ganacsiga kalluumeysiga. Markay qarnigii 20-naad timid, magaaladu waxay isu rogtay deked aad u wanaagsan.
Suuqa ama souk oo Carabi ah, oo ku yaal dhinaca dekkada 'Deira' ayaa ugu weyn xeebtaan, wuxuu u adeegi jiray guri ilaa 350 dukaanno oo ay ku dhex socdaan ganacsato iyo booqdeyaal joogto ah. Intii lagu gudajiray helitaanka saliida sanadkii 1966, Sheikh Rashiid wuxuu u adeegsaday daqliga kasoo gala saliida inuu bilaabo hormarinta kaabayaasha magaalada.
Maanta, Dubai waxay noqotay magaalo sharaf dhac ku ah dhismaheeda cajiibka ah, isboorti heer caalami ah iyo munaasabado madadaalo, iyo huteello aan la aqbali karin. Tusaalaha ugu fiican maahan marka laga reebo hudheelka weyn ee Burj Al Arab ee ku yaal xeebta xeebta Jumeirah. Tani waa hoteelka kaliya ee adduunka oo bixiya adeegyo 7-xiddig leh. Waxa kale oo jira Dhismooyinka Imaaraatka ee Imaaraatka (Emirates Towers), oo ka mid ah dhismayaasha badan ee idin xusuusin doona kalsoonida ganacsi ee magaalada ku soo kordhaysa oo ku koraysa heer aan caadi ahayn.
Dhacdooyinka waaweyn ee isboortiga ee adduunka ayaa sidoo kale inta badan lagu qabtaa Dubai. Waxaa jira Dubai Desert Classic taas oo ah joogsiga ugu weyn safarka Xirfadleyda Golf. Kumaan kun oo dalxiisayaal ah sanad walba ayaa sidoo kale loosoo bandhigayaa koobka adduunka ee Dubai, orodka adduunka ugu taajirsan, tartan tennis ATP ah, iyo Dubai Open.
Dubai waa xarunta ganacsiga ee ugu weyn gobolka, tanina waxaa ugu wacan sababteeda meesha ay ku taal bartamaha adduunka, oo door muhiim ah ka cayaarta ahmiyaddeeda ganacsiga caalamiga ah. Si kastaba ha noqotee, dowlad Islaam ah, waxaa jira qawaaniin gaar ah oo la xiriira la kulanka xirfadleyda jinsi ama ka soo horjeedda, kuwaas oo ay ka mid yihiin inaadan is gacan qaadin. Sidoo kale, maskaxda ku hay in Muslimiintu ay tukadaan shan jeer maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah lama socdaan socdaallada ganacsiga.
Thanks to meesha ay ku fiican tahay, isku xirnaanta sare iyo adeegyada ganacsiga oo dhan, Dubai waa hada xudunta ganacsiga iyo ganacsiga gobolka. Dowladdu waxay si wanaagsan u taageerta ganacsatada shuruucda ugu hufan ee laga helo meel kasta oo gobolka ka mid ah. Magaalada waxaa ka jira aag canshuur la'aan ah, kaabayaal heer caalami ah iyo helitaan shaqaale soo koraya oo xirfad shaqo u leh. Dubai waxay u kacday inay noqoto mid ka mid ah waddammada ugu waaweeyn magaalooyinka waaweyn sababtuna tahay shaqaleyntooda xoogga leh, koror ballaaran ee dakhliga qofkiiba iyo istiraatiijiyad saliid ah.
Dhaqaalaha Dubai waxaa markii hore lagu aas aasay ganacsiga soo jireenka ah, laakiin wuxuu u dhaqaaqay kheyraadkiisa dabiiciga ah qeybtii dambe ee qarnigii 20aad, isagoo noqday dhaqaale ku saleysan saliida. Si kastaba ha noqotee, dakhliga ka soo gala saliida ayaa si tartiib tartiib ah loo dhameystirey ka dib markii dambena lagu bedelay dhaqaalo ay wadaan adeegyo cilmi ku saleysan.
Tallaabada Emirate-ka ay ku gaartay inay ku guuleysato magaalo-casri casri ah oo ay ku horumartay teknolojiyadda iyo hal-abuurka ayaa ah sababta ay taageero buuxda ugu fidisay ganacsatada hal-abuurka leh ee qurbaha ka yimid ee doonaya inay iskood isaga dhigaan Dubai.
In kabadan 90% waxqabadka ganacsiga ee Emirate-ka maanta waxaa ka mid ah ganacsiga, adeegga maaliyadeed, saadka, martigalinta iyo dalxiiska, guryaha, dhismaha iyo wax soosaarka, kuwaas oo hadda 90% ka ah waxqabadka ganacsiga ee Emirate-ka.
Iyada oo ay weheliso meesha ay ku taal istiraatiijiga ah, kaabayaasha heerka adduunka, fududeynta ganacsiga, iyo kala-duwanaanshahan, Dubai waa ikhtiyaar dabiici ah oo loogu talagalay ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay bilaabaan hawlgal ama ballaarin Bariga Dhexe.
In kasta oo korodhka meteoric ee Dubai uu dhakhso u deg degsanaa, haddana magaaladu waxay hadda u fiican tahay inay tahay meesha ugu weyn ee ay Bariga Dhexe u tagto xarumaha shirkadaha waaweyn. Magaca sumcadda caalamiga ah ee ah maalgashi xoog leh iyo soo saare hanti ayaa sii wadaysa kobcinta magaalada oo soo jiidata shirkadaha caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee SME.
Dhaqanka iyo Nolosha
Dubai waxay leedahay hodan dhaqan dhaqameed carabi ah. In kasta oo ay hadda tahay isku-dhafka lamadegaanka, xeebaha iyo firaaqyada dadku sameeyo, dhaqanka dadka Emirati wali waa mid aad u firfircoon. Dubai waa Boqortooyo dhammeystiran waxaana xukumayey qoyska Al Maktoum ilaa 1833. In kasta oo nolosha Dubia ay ku hoos jirto dhaqan iyo dhaqan, Imaaraadku waa meel soo dhawayn wanaagsan.
Dhaxalka Islaamka ee Imaaraatka ayaa la ilaaliyay, iyadoo badidoodu ay yihiin Muslimiin, laakiin dadka asaliga ah ayaa si aad ah ugu dulqaadanaya dhaqamada kale iyo dadka leh diimaha kala duwan. Sidaas darteed, Dubai waxay hoy u tahay in kabadan 200 oo dhalasho. Guud ahaan magaalada buuqa badan waxaa ku jira in kabadan 6000 maqaaxiyo iyo kafateeriyayaal bixiya cuntooyin laga cuno geeskasta oo qaaradda ah.
Mid kale oo ka mid ah meelaha soo jiidashada badan ee Dubai waxaa ka mid ah ikhtiyaarada wax laga iibsado sidoo kale. Waa magnet deg-deg ah dukaameystayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye sababta oo ah iibsiyada canshuur-dhaafka ah ee dadku soo iibsan karaan. Waxaad ka heli doontaa suuqyo waaweeyn iyo kuwa waaweyn oo bixiya khibrada ugu dambeysa ee dukaamaysiga qaaliga ah, laakiin haddii aad tahay ugaarsade gorgortan ah oo raadinaya iibsashada ugu wanaagsan ee ugu jaban qiimaha, markaa souksyada caanka ah ee Dubai ayaa kaa daboolay.
Waxaa jira wax fursad u ah booqdayaasha kasta, dharka labiska ilaa dharka fadhiga, qalabka gadashada, waxyaabaha macaan ee maxaliga ah iyo waxyaabo kaloo badan. Qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee dukaameysiga waxaa ka mid ah The Dubai Mall, Wafi Mall, Mall of Emirates, Deira Gold Souk, Global Village, Burjuman Center, Souk Madinat Jumeirah. iyo inbadan.
Astaamaha Dalxiiska ee Magaalada Dubai
Dubia waxay hoy u tahay soojiidashooyin yaab leh iyo mashruucyo naqshadeysan oo dhiirrigeliya kuwaasoo beddelay muuqaalka magaalada iyo dariiqa cirka. Qaar ka mid ah astaamaha dhulka ayaa leh sharafta in ay yihiin qaar ka mid ah cajaa'ibyada ugu dhaadheer, kuwa ugu waaweyn uguna quruxda badan adduunka. Calaamadahan summadaha leh qaarkood waxaa ka mid ah Burj Khalifa; Qaab dhismeedka ugu dheer ee dadku sameeyay dunida oo dhan 828 mitir. Waa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan Bariga-Dhexe waxaana loo yaqaanay "Jewel of Dubai".
Palm Jumeirah; jasiirad nin-ka sameysan, oo ka mid ah saddexda jasiiradood ee loo yaqaan 'Palm Islands' iyo kuwa ugu dambeeyay liiska dheer ee soo jiidashada leh. Jasiiraddu waxay bixisaa waxqabadyo badan oo dalxiisayaal ah si ay ula qabsadaan. Kuwaas waxaa ka mid ah suuqyo suuq geyn ah oo hudheello ah, dalxiisyo xeebeed qaali ah, iyo waxyaabo kaloo badan, Xeebta Dalxiiska ee Al Sahra ayaa ku taal bartamaha dunidan nabadeed oo bixiya khibrad cajiib ah oo ku saabsan nashaadaadyada. cidlada.
Dalxiiska ayaa leh dhammaan noocyada munaasabadaha gaarka ah iyo dabaaldega waxayna siisaa dhowr ikhtiyaar oo qado ah, hudheelka 7-xiddigle Burj Al Arab; kaas oo ah hudheelka afraad ee ugu dhaadheer adduunka oo bixiya waxa ugu wanaagsan ee raaxada. Huteelkani waa naqshadeeye naqshadeeye oo aan la jaan qaadi karin dhisme kasta oo adduunka ka jira.
Isha Biyaha ee Dubai; kaas oo leh awooda lagu buufiyo in ka badan 22,000 oo galan oo biyo hawo ah ilaa 902 cagood dherer ah oo ay ku iftiiminayaan 6,600 nalal iyo 25 mashruuc oo midabeysan, iyo inbadan oo kale.
Soojiidashada ugu sareysa ee Dubai
Laga soo bilaabo xasilloonida weligeed ah ee lamadegaanka ilaa buuqa xurgufta leh ee Souk, Dubai waxay martida u siisaa soojiidasho kale oo xiiso leh.
In kasta oo ay aag yar yar tahay, haddana waxa jira meelo badan oo muuqaallo ah oo aad ka heli karto amiirka. Hal maalin gudaheed, dalxiis wuxuu awood u yeelan doonaa inuu la kulmo waxkasta, laga bilaabo ciidda balaaran ee ciidda ah iyo buuraha dhaadheer ilaa jardiinooyinka cagaaran ee dabiiciga ah iyo xeebaha bacaadka ah, laga bilaabo degmooyinka daggan ee la deggan yahay iyo tuulooyinka boodhka ah, iyo laga soo iibsado suuqyada waaweyn ilaa iyo qadiimiga. guryuhu waxay ka buuxaan munaarado.
Imaaraadku waa dib-u-dhac dib-u-dhac ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha iyo xarun ganacsi oo caalami ah oo isku mar ah. Tani waa magaalo ay fududaanta sanadihii la soo dhaafay ay barbar socoto fasalka qarniga 21-aad. Waad ku mahadsan tahay isbarbardhigyadan, kuwani waxay siinayaan magaalada Dubai mid ka mid ah shakhsiyadda noocaas ah iyo dhadhanka, bulsho isku dhafan oo ku faaneysa qaab nololeed caalami ah.